Dib Ugu Laabashada Dugsiga MMW | Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka
Dugsiga Dhexe West menu
Dugsiga Dhexe ee Minnetonka West
Hanuuninta Fasalka 6aad
Daawadu waxay u Dhoofeysaa Qoysaska Fasallada 6aad, 7aad, iyo 8aad
Faahfaahinta Amniga MMT iyo baratakoolka
Guudmarka Jadwalka Isku-Darka
Ardaydu waxay ku qaadan doonaan laba maalmood jir ahaan iskuulka (Ama Isniinta / Talaadada (Kooxda Tonka) ama Khamiista / Jimcaha (Team Skippers)
Ardayda waxaa loo kala qaybin doonaa alifbeetada 50/50 koox
Magacyada dambe ee laga bilaabo A-Li waxay noqon doonaan Isniin / Talaado, waxaana loogu yeeri doonaa Kooxda Tonka. Magacyada ugu dambeeya ee ka bilaabanaya Lo-Z waxay noqon doonaan Khamiista / Jimcaha, waxaana loogu yeeri doonaa Team Skippers. Waxaan la wadaagi doonnaa shaqooyin gaar ah ee adiga ardayda ah usbuuca soo socda.
Xadidnaanta boosaska adag ee gobolku dejiyay awgood, ma awoodno inaanu qabanno codsiyada kooxaha beddelaya xilligan.
Arbacada waa maalin e-barashada dhammaan.
Toddobaadyada aan fasax Isniinta ama Jimcaha qaadanno, waxaan raaci doonnaa 2-da maalmood ee shakhsiga / wareegga internetka. Ma yeelan doonno Arbacada elektaroonigga ah inta lagu jiro toddobaadyadan.
Jadwalka xayndaabku wuxuu yeelan doonaa saddex fasal maalin kasta + qado / latalin. Fasal kasta wuxuu noqon doonaa ugu yaraan 99 daqiiqo.
Laba ka mid ah maalmaha elektaroonigga ah (Isniinta / Talaadada ee loogu talagalay Kaamirooyinka Kooxda iyo Khamiista / Jimcaha ee Kooxda Tonka), ardayda waxay heli doonaan isku-dar ah dhammaystir dhammaystiran ama waxbarid khaas ah oo khadka tooska ah ah; waxyaabaha khaaska ah ee khadka tooska ah way ku kala duwanaan doonaan.
Maalinta iskuulka oo dhan e-learning (Arbacada) waxay yeelan doontaa "jadwal caato ah." Dhammaan fasallada way kulmayaan si kooban, oo ay ku xigto MAST / saacadaha xafiiska / ama waqti kale oo faragelin ah. Maalinta ardaygu wuxuu dhammaan doonaa 2da duhurnimo Arbacada.
Ardaydu waxay leeyihiin la-talin seddex maalmood usbuucii (maalmaha shaqsiyeed iyo Arbacada fasalka oo dhan)
Dhismuhu wuxuu u furmayaa maalinta dugsiga 8:45 subaxnimo. Ma jiri doono marin loo fidiyo dhismaha ka hor 8:45 haddii aan horay loogu sii diyaarin xubin shaqaale ah
Waxaan horumarinaynaa barnaamij kormeer ah oo iskuulka kahor-iskuulka ah (awood hoos udhac ah). Faah faahin dheeri ah goor dhaw ayaan la wadaagi doonaa.
Waxqabadyada dugsiga kadib waxaa la heli doonaa maalmaha shaqsi ahaanta.
Ahmiyadeena koowaad waa in iskuulka uu ahaado mid amaan ah sida ugu macquulsan ardayda iyo shaqaalaha. Marka lagu daro tilmaamaha caafimaadka iyo amniga degmada oo dhan, borotokoollada gaarka ah ee MMW waxaa ku jiri doona kuwa soo socda:
Maaskarada waxay u baahan yihiin in la xidho wakhti kasta, ilaa laga saaro ujeeddooyin waxbaris (muusig gaar ah ama waxqabadyo ficil ah, ama ka-dhaafitaannada kale ee ka madhan maaskarada sida ay ku farayaan MDH iyo MDE). MMW waxay raaci doontaa Siyaasadda Degmada ee Daboolista Wajiga dhammaan kiisaska u hoggaansanaan la'aanta rajooyinka maaskaro.
Waqtiga bilowga iyo dhamaadka waqtiga iskuulka oo wareersan
Ardaydu waxay ka gelayaan dhismaha barta loo qoondeeyey gelitaanka
Shaqaalaha kormeerka ayaa xaqiijin doona hubinta heerkulka waxayna hubinayaan in ardayda ay soo galaan dhismaha oo ay toos u aadaan fasalkooda saacadda ugu horreysa.
Waxaan lahaan doonnaa kabaxitaan xarago leh. Ardayda soconaysa, ama lagu qaado gaari khaas ah ama baska raacaya waxay ka baxayaan xilliyada lagu dhawaaqay, xilliyada xilliyada.
Waqtiga oo laga gudbo iyo waqtiyo kale oo aan qaabaysnayn
5-daqiiqo hakad galay waqtiga dhaafitaanka
Ardaydu way ka bixi doonaan fasalka markii kooxdooda la sii daayo / la shaaciyo. Albaabka laga soo galo marinka waxaa loo qaybin doonaa saddex kooxood.
Dhamaan wadiiqooyinka waxaa lagu calaamadeeyay istiraatiijiyo fogeyn bulsheed oo lix cagood ah. Shaqaaluhu waxay hubin doonaan in ardaydu si isdaba joog ah ugu dhex dhaqaaqaan hoolka, iska ilaaliyaan inay la shiraan asxaabtooda oo ay aadaan meesha fasalkoodu ku xigi doono.
Ardayda waxaa laga yaabaa inay wataan boorsooyin ay ku qaadan karaan alaabada fasalka ilaa fasalka. Helitaanka sanduuqyadu waxay ku koobnaan doonaan bilowga iyo dhammaadka maalinta ama haddii loo baahdo ujeeddooyin waxbaris. Sanduuqyada ayaa loo qoondeyn doonaa bartamaha Sebtember.
Inta lagu jiro waqtiga, musqulaha waa lala socon doonaa si loo hubiyo awooda ku habboon.
Miisaska ayaa dusha looga nadiifin doonaa bilowga iyo dhamaadka fasalka.
Ardayda shaqsiyeed waxay ku qadeyn doonaan makhaayadda (ama bannaanka, saamaxida cimilada) lix fuudh.
Ardayda xulaneysa ikhtiyaarka elektaroonigga ah ee buuxda waxay raaci doonaan jadwal isku mid ah ardayda isku dhafan (oo leh kala duwanaansho guriga dhexdiisa ah). Ardaydu waxay heli doonaan diiwaangelintooda koorsada oo buuxda. Koorsooyinka badankood waxay noqon doonaan qaybo gebi ahaanba khadka tooska ah, oo leh macallin khadka tooska ah leh iyo dhammaan ardayda kaqeybqaadanaya barashada elektaroonigga ah. Koorsooyinka elektaroonigga ah qaarkood ayaa sidoo kale lagu dari karaa ardayda iyo macallimiinta MME. Tiro kooban oo koorsooyin khaas ah ayaa laga yaabaa in lagu sii daayo koorsooyin isku dhafan iyo taageero internetka ah.
Ardayda waxaa lagu meeleyn doonaa qeybta e-barashada oo ay la socdaan macalin heegan ah iyo ardayda kale ee soo xushay doorashadaas markasta oo ay suurtagal tahay. Waxay kuxirantahay isqorista koorsada, koorsooyinka qaarkood waxaa laga yaabaa in si toos ah loogu shubo si ardayda ardeyda tooska ah looga siiyo fursad ay ku helaan koorsooyinka oo dhan.
Barashada elektaroonigga ahi waxay raacdaa isla baaxadda / isku xigxigta / kaalandarka qofka shaqsiyan wax loo barto. Ardaydu waxay uga wareegi karaan khadka tooska ah ee internetka iyagoo u gudbaya dhamaadka rubuc kasta.
Maalmaha barashada elektaroonigga ahi waa maalmaha caadiga ah ee dugsiga ee ardayda iyo macallimiinta.
Ardayda ayaa heli doona manhajka heerka fasal oo buuxa, tan waxaa ku jiri doona fasalo takhasus leh.
Waalidku waa qayb muhiim ka ah guusha ardayga. Taageero qaas ah iyo waalidiinta socota iyo wada xiriirka macallimiinta ayaa ka mid noqon doona ku laabashada dhacdooyinka dugsiga, sida hanuuninta fasalka loo dejiyey iyo aaladaha isgaarsiinta, xiriir joogto ah iyo shirar fasal oo lala yeesho macallinka, iyo fursadaha hal ilaa hal kulan oo lala yeesho macallinka.
Dhammaan barnaamijyada waxaa la bixin doonaa oo ay ku jiraan Biyo-gelinta, karti sare, dardargelin, iyo fasallo horumarsan. Waxay kuxirantahay isqorista koorsada, barnaamijyada qaar waxaa lagu bixin karaa iyadoo la adeegsanayo qulqulka tooska ah si ardayda ardeyda toos loogu helo. Barnaamij dhammaystir ah iyo soo bixitaan ah ayaa lagu bixin doonaa labadaba qaab isku mid ah iyo qaab-dhismeedka loo yaqaan 'asynchronous'.
Hawlaha manhajka ka baxsan ayaa si gaar ah muhiim noogu ah xilligan. Si loo hubiyo in ardaydu si nabadgelyo leh uga qaybqaadan karaan waxqabadyada manhajka ka baxsan, tababarayaasha iyo la-taliyayaashu waxay si joogto ah u qorsheynayaan sidii ay ula qabsan lahaayeen howlahooda si ay u ahaadaan kuwo ammaan ah oo ku howlan. Hawl kasta waxay u muuqan doontaa wax yar oo ka duwan oo waxay yeelan doontaa awoodda ugu badan ee kalfadhi kasta, laakiin waxaan haysan doonnaa inta badan howlaheenna caadiga ah xilligan dayrta marka laga reebo kubbadda laliska, oo dib loo dhigo illaa sannadka dambe. Waxqabadyada sanadka dambe gudihiisa dib ayaa loo shaacin doonaa.
Diiwaangelinta isboortiga waxay furmi doontaa laga bilaabo usbuuca Isniinta, Ogosto 24-keeda.
Waxqabad kasta waxaa loo qaybin doonaa Tonka (Isniinta iyo Talaadada) iyo Skippers (Khamiista iyo Jimcaha). Qoysasku waxay u baahan doonaan inay iska diiwaangeliyaan waxqabadka u dhigma jadwalka shaqsiyeed ee ardaygooda.
Ardayda sameyneysa elektaroonigga, iskuulka gaarka loo leeyahay, ama iskuulka, waxay u baahan doonaan inay isdiiwaan galiyaan maalmihii ay iskuulka joogi lahaayeen.
Diiwaangelinta Orodka Waddanka ee horay loo dhammaystiray waxaa gacanta lagu waafajin doonaa maalmaha ku habboon - qoysasku uma baahna inay dib isu diiwaangeliyaan.
Diiwaangelinta Quarter 1 Brightwatch waxay furmi doontaa laga bilaabo Ogosto 24keeda waxayna ku saleysnaan doontaa maalmaha usbuuca. Tani waxay ka dhigan tahay waxaad u baahan doontaa inaad si gooni ah isuqorto maalinta ama maalmaha usbuuca uu ardaygaagu dhigan doono Brightwatch. Kharashka hawshan ayaa la caddeeyay maalin kasta. Waxaan heli doonaa boos kooban oo Brightwatch ah si aan u fiirsano kala fogaanshaha bulshada.
Fadlan la soco diiwaangelinta waxqabad ee dheeri ah oo furma dugsiga ka dib markuu bilowdo deyrta iyo sannad dugsiyeedka oo socda. Ogeysiisyada waxqabadyada waxaa looga sameyn doonaa iskuulka ardayda iyo warqadda waalidka. Fadlan booqo bogga Waxqabadyada MMW wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan waxqabadyada shaqsiga ah.
Waxaan hadda sugeynaa hagida MDH ee ku saabsan haddii aan u adeegsan doonno qolalka labiska si aan ugu beddelno fasallada Waxbarashada Jirka. Ilaa aan kaheleyno hagitaan qaas ah, waxaan hakad ku jirnaa wadaagida macluumaadka ku saabsan iibsashada lebiska jimicsiga ee ardaygaaga. La soco macluumaad dheeri ah.
Ansixinta jadwalka xannibaadda iyo liisaska la xaqiijiyay ee kuwa xulaya iskudhafka iyo khadka tooska ah, waxaan ku boodnay hannaanka jadwalka dhismaha, fasallada, qolalka loo qoondeeyay ee u shaqeyn doona dhammaantood.
Arag Jadwalka Maalinlaha ee 2020-21
Arag Jadwalka Arbacada 2020-21
Sidee Fasalka 6aad / Hanuuninta Ardayda Cusub u shaqeyn doontaa:
Dhammaan ardayda fasalka 6-aad iyo ardayda cusub waxaa loo qaybin doonaa shan koox oo alfa ah oo loo qoondeeyay 30 daqiiqo oo iskuullo ah. Xayiraadaha wadajirka ah awgood, qoysaska waxay xaadiri karaan oo keliya inta lagu jiro waqtigooda loogu talagalay. Si loo hubiyo kala fogaanshaha bulshada, qoysaska oo dhan waxaa laga codsan doonaa inay nadiifiyaan dhismaha ka hor inta kooxda soo socota aysan soo galin.
4: 00-4: 30 Magacyada dambe AC
4: 45-5: 15 Magacyada dambe DH
5: 30-6: 00 Magacyada dambe I-Mi
6: 15-6: 45 Magacyada dambe ee Mo-Si
7: 00-7: 30 Magacyada dambe Sm-Z
Si loo hubiyo awooda ku habboon, ardayda waxay xaadiri karaan hal qof oo qaangaar ah.
Kooxuhu waxay ka soo galayaan albaabka Xarunta Warbaahinta (albaabka 32E) waxayna helayaan khariidadda dhismaha.
Ardaydu waxay ku daabacan karaan jadwalkooda jadwalka guriga ama waxay kala soo bixi karaan ipadkooda ama taleefankooda. Jadwalka waxaa laga heli karaa Skyward adiga oo gujinaya tabta buluugga JADWALKA. Haddii aadan heli karin jadwalkaaga, mid baan kuu diyaarinaynaa.
Lammaanaha ayaa ku sii socon doona socdaal is-hagitaan ah; waxay heli karaan casharadooda, waxay ku odhan karaan “hi” macallimiinta, waxayna heli karaan meelo kale oo muhiim ah oo dhismaha ka mid ah.
Maanaan qoondeynin sanduuqyo xilligan, tani waxay dhici doontaa dhammaadka Sebtember.
Dhammaan kooxaha waxay ka bixi doonaan irridda weyn. Ardaydu markaa waxay ka soo gali karaan maqaayada albaabka 2E halkaas oo ay sawirkooda ka qaadi karaan. Eeg Foomka Amarka Sawirka Dugsiga.
Kormeerayaasha kormeerka, maamulka, iyo shaqaalaha taakuleynta ayaa ku hagi doona kooxaha dhismaha oo hubinaya inay ka baxaan dhamaadka waqtigooda loo qorsheeyay.
Macallimiintu waxay joogi doonaan qolalkooda, laakiin ma lahan doonaan wax soo bandhig rasmi ah.
Fadlan ku xaddid isdhexgalka macallimiinta bulsho fog, salaan kooban.
Intii aan u noqon lahayn qaab rasmi ah, shaqsi ahaan ku soo noqoshada bandhigyada dugsiga, waxaan la wadaagi doonnaa xiriiriye google dhammaan macallimiinta koorsadooda macluumaadka iyo bandhigyada muuqaalka ah.
Isbedelka shaqaalaha awgood, lataliyahaaga fasalka 6aad wuxuu hadda noqon doonaa Laura Rosati. Waxaad ka heli kartaa macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan moodelladayada la-talinta ah bogga MMW . Ka daawo xiriir dheeri ah oo soo socda iyo fiidiyow ka socda Saaxiibbada Koowaad
Waxaan uqaadan doonnaa dhammaan / dhammaan daawooyinka loo baahan yahay dugsiga si ka duwan si loo yareeyo soo-gaadhista qoysaska iyo shaqaalaha. Haddii ardaygaaga dhigta Fasallada 6-8 uu uga baahdo dawo dugsiga, waxaan ku qaban doonnaa daawada Arbacada, Sebtember 2, laga bilaabo 9a-3pm albaabka hore ee MMW.
WAXA AAN KA KHASRAYNAYNAA DAWEYNTA DAWLADA EE DUGSIGA inta lagu jiro waqtigan aan horay loo arag si loo xadido safarada xafiiska caafimaadka iyo iyadoo ay ugu wacan tahay daawooyinka oo qarin kara astaamaha Covid.
Markaad timaaddo fadlan ka wac xafiiska caafimaadka lambarka (952) 401-5318 haddii aadan ku arkin Shaqaalaha Xafiiska Caafimaadka oo miiska saaran (haddii ay cimiladu tahay).
Fadlan si taxaddar leh u aqri tilmaamaha soo socda ka hor intaadan u imaan daawooyinka:
Qorshayaasha Daryeelka Caafimaadka iyo Daawooyinka Iskuulka
Haddii ilmahaagu qabo walaac caafimaad oo u baahan daawo gudaha dugsiga ama qorshe caafimaad ama qorshe daryeel deg-deg ah, fadlan la ballan ballan dhakhtarka carruurta ee ilmahaaga si aad ugu cusboonaysiiso qorshahooda caafimaad / deg-deg ee dugsiga sida ugu dhakhsaha badan. Waxaan ubaahanahay qorshooyin caafimaad oo cusub iyo / ama foomamka dawooyinka sanad dugsiyeed kasta ee dhammaan daawooyinka looga baahan yahay iskuulka.
Xarumaha caafimaadka badankood waxay leeyihiin qorshooyin daryeel u gaar ah oo loogu talagalay neefta, xasaasiyadda daran, sonkorowga iyo qalalaasaha. Qorshayaasha caafimaadka / xaaladaha degdegga ah iyo foomamka loogu talagalay daawooyinka laguu qoro waa inuu saxeexaa dhakhtarka ama kalkaaliyaha caafimaad iyo waalidka / ilaaliyaha. Macluumaadka caafimaadka waxaa lala wadaagi doonaa shaqaalaha dugsiga baahida loo qabo in la ogaado aasaaska si loo hubiyo amniga ilmahaaga ee dugsiga.
Foomamka dawooyinka dhakhtarku qoro ayaa laga heli karaa halkan , waxayna u baahan yihiin labadaba saxiixa bixiyaha iyo waalidka. Daawooyinka OTC waxay u baahan yihiin oo keliya foomka saxiixa waalid waxaana laga heli karaa halkan . Fadlan hubi dhammaan taariikhaha dhicitaanka, hubi in dhammaan daawooyinka ku jiraan dhalada asalka ah.
Haddii aad ka qeyb galeyso soo dhaweynta fasalka 6aad bisha Sebtember 3deeda laga bilaabo 12-8pm, waxaad kaloo la imaan kartaa waraaqo iyo dawo maalintaas.
Sababo nabadgelyo awgood, DHAMMAAN waraaqaha loo baahan yahay waa in la dhammaystiro, la saxeexaa oo lala yimaadaa dawooyin kasta. Daawooyinka la bixiyo iyadoon waraaqo sax ah ama dhameystirneyn laguugu soo celin doono adiga oo dhameystiraya.
Ahmiyadeena ugu weyn waa in iskuulka uu ahaado mid amaan ah sida ugu macquulsan ardayda iyo shaqaalaha. Marka lagu daro tilmaamaha caafimaadka iyo nabadgelyada ee degmada oo dhan, borotokoollada gaarka ah ee MMW waxaa ku jiri doona kuwa soo socda:
Maaskarada waxay u baahan yihiin in la xidho wakhti kasta, ilaa laga saaro ujeeddooyin waxbaris (muusig gaar ah ama waxqabadyo ficil ah, ama ka-dhaafitaannada kale ee ka madhan maaskarada sida ay ku farayaan MDH iyo MDE). Waxaan raaci doonnaa Nidaamka Daboolida Wajiga ee Degmada dhammaan kiisaska u hoggaansanaan la'aanta waxyaabaha laga filayo.
Waxaan rajeyneynaa waa inaad hubiso heerkulka canuggaaga kahor intaanad iskuulka u dirin, oo aad guriga ku haysatid haddii 100.0 F ama wixii ka sareeya.
Istiikarada kala fogeynta bulshada ayaa loo meeleyn doonaa si looga caawiyo hagida ardayda meelaha la wadaago.
Ardayda waxay heli doonaan fursado ay banaanka ku joogaan maalinta oo dhan, marka cimiladu saamaxdo.
* Fadlan eeg bogga internetka ee Dugsiga Dib Ugulaabashada Dugsiga 2020-21 wixii macluumaad dheeri ah, oo ay kujiraan borotokoollada caafimaadka iyo tallaabooyinka amniga ee meesha yaala. *
Hubso in sanduuqaaga codka uusan buuxin oo naga hor istaagaya inaan fariin kaaga tagno.
Fadlan ka jawaab taleefankaaga haddii aad ku aragto shaashaddaada 952-401-5300. Taasi waa lambarka ugu weyn ee MMW, qofna wuxuu isku dayayaa inuu kula soo xiriiro.
Dib-u-eegid websaydhada Degmadda ee Dugsiga si aad ugu baratid Qorshaha Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka ee sanad-dugsiyeedka 2020-21 oo ay ku jiraan Siyaasadda Daboolida Wajiga Degmada , baaritaanka heerkulka, iyo goorta cunugga laga ilaalinayo inuu dugsiga ka maqnaado markuu caafimaad qabo. Ilmo kasta oo muujiya astaamaha jirrada waxaa loo diri doonaa guriga.
Fadlan hubi in tallaalada ardaygaaga ay yihiin kuwo cusub oo waraaqaha loo rogay xafiiska caafimaadka maalinta ugu horreysa ee dugsiga. Waxaad ku soo diri kartaa cinwaanka tallaalka ardaygaaga tracey.hickey@minnetonkaschools.org ama rachel.snyder@minnetonkaschools.org .
Soo wac ama iimayl u dir tracey.hickey@minnetonkaschools.org ama rachel.snyder@minnetonkaschools.org haddii aad wax su'aalo ah qabtid ama aad u baahan tahay inaad sameysato waqti kale oo fasax ah.
Xiriirrada Degdega ah
Cusboonaysiinta Maamulaha Schirmacher - Ogosto 22, 2020
Warqadda Qoyska Cusub Fasalka 6aad
Qoraalka Qoyska Cusub ee Fasalka 7-8